DAAWO VIDEO: Weerarkii Westgate Waxaa Hogaaminayay Sargaal katirsanaa Raaskambooni “Top News” - iftineducation.com
DAAWO VIDEO: Weerarkii Westgate Waxaa Hogaaminayay Sargaal katirsanaa Raaskambooni “Top News”
iftineducation.com – Channel 4 TV ayaa waxaa ay baaritaan ku sameysay hogaamiyaha weerarkii Westgate Mall ee magaalada Nairobi dalka uu u dhashay iyo diinta uu heysan jiray.
Xog badan oo TV-gan uu helay ayey ku sheegeen inuu ninkaasi ahaa mid u dhashay dalka Kenya isla markaasna heysan jiray diinta Christian ka, waxaana sidoo kale uu ka mid ahaa ciidanka gaar ee Kenya .
RIIX HALKAN: DAAWO VIDEO-GA+CADEYN
Ninkan ayaa magaca uu ku dagaal galayey waxa uu ahaa Cumar ama Umayr . Waxaana la aaminsan yahay inuu ku dhintay ninkaasi weerarkaasi Westgate lagu qaaday ee uu isaga hogaaminayey.
Cumar waxa uu Kenya isaga baxay sanadkii 2005 isaga oo xilligaasi ku biiray kooxda Ras-Kamboni ee islaamiyiinta ah waana xilliga uu hogaaminayey Shiikh Xasan Turki oo hadda Al-Shabaab ku jiro, kadibna waxaa uu uga sii gudbay inuu kooxda Al-Shabaab ku biiro.
“Umayr is understood to have left Kenya for Somalia in 2005, where he joined the Ras-Kamboni militant Islamist group. Kamboni later joined with al-Shabaab.”
Xogta la heshay ayaa waxaa ay sheegeysaa inuu Cumar kooxda Al-Shabaab bari jiray qaabka dagaalka iyo isaga la isku difaaco, maadaama uu ahaa sarkaal ciidan oo khibrad badan lahaa. Waana arrinta looga maarmi waayey inuu howlgalkan hogaamiyo.
Channel 4 xogta ay heshay waxaa lagu sheegay inuu howlgalkan sidoo kale wax ka hogaaminayey nin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay Khadhab kaasi oo xilli hore dukaan lagu iibiyo cajalada diini ah ku heysan jiray Islii, balse xilli sii horeysay aaday Soomaaliya kadibna halkaasi ay ku xireen ciidanka dowlada Soomaaliya iyo kuwa CIA mareynkanka .
Waxaana warbixinta la helay ay sheegeysaa in markii la sii daayey inuu u talaabay kooxda Al-Shabaab oo uu ku biiray.
Dowlada Kenya ayaa dhankeeda ilaa hadda cadeyn dhalashada raga hubeysan ee geystay weerarkii Westgate ee magaalada Nairobi. Sida lagu yiri xogta Channall 4.
Khamiistii ayey aheyd markii Interpol soo saareen qoraal ah dowlada Kenya uga dalbanayaan inays oo qabtaan haweeney u dhalatay dalka UK oo la yiraahdo Samantha Lewthwaite oo mar hore lagu muransanaa inay ku jirtay weerarka Westgate balse aan ilaa hadda la heyn . Waxaana qabay ninkii ka danbeeyey qaraxyadii London ee gal hore.
Afhayeenka kooxda Al-Shabaab oo la hadlay Channel 4 ayaa waxaa uu si cad u sheegay in qorshaha iyo howlgalka westgate uu iska lahaa fikirkeeda hogaamiyaha kooxdaasi Al-Shabaab Ahmed Godane ninka lagu magacaabo.
Geerida 67 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkii Westgate balse waxaa dhici karta inay intaasi geerida kasii badato.
Dowlada Soomaaliya oo Wada Qorshe Ay Ku Mideynayso Bulshada Gobolada Dhexe